Nei Uchifanira Sarudza Silicone-Rubber Keypads
ne admin pane 20-04-22
Silicone-yerabha keypads anoshamisa nyoro uye akasununguka kushandisa kana achienzaniswa nezvimwe zvinhu. Nepo zvimwe zvinhu zvakaoma uye zvakaoma kushandisa, silicone rabha yakapfava uye yerabha. Izvo zvakakoshawo kutaura kuti silicone = rabha keypads inopesana nekunyanyisa tembiricha. Kunyangwe iyo ...
Mechanics yeSilicone-Rubber Keypads
Kunyangwe paine nzira dzakasiyana dzekugadzira silicone-yerabha keypads, mazhinji anoratidzira yakafanana fomati inosanganisira yesilicone rabha zvinhu zvakapoteredzwa nemagetsi switch pakati. Pazasi peiyo silicone yerabha zvinhu zvine inoitisa zvinhu, senge kabhoni kana goridhe. Pazasi peiyi conductive ...
Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve Silicone-Rubber Keypads
Silicone-rabha keypads yakave yakakurumbira sarudzo pakati pevaridzi vebhizinesi uye mainjiniya mainjiniya. Iyo inozivikanwa zvakare seelastomeric keypads, ivo vanorarama zvinoenderana nemazita avo nekuratidzira yakapfava silicone yerabha yekuvaka. Nepo mamwe akawanda keypads achigadzirwa epurasitiki, aya akagadzirwa nesilicone-rubber ....
Radiator Rubber Isolators, Passive Bass Radieta, Diki Aluminium Led Radieta, Radiator Rubber Gomo, Passive Radieta, Bass Radiator,